भर्खरै बाहिरियो आमा छोराको कल डिटेल हेर्नुहोस ! किन आमाले यस्तो सम्म गरिन्? | Public 24Khabar
Home News भर्खरै बाहिरियो आमा छोराको कल डिटेल हेर्नुहोस ! किन आमाले यस्तो सम्म...
भर्खरै बाहिरियो आमा छोराको कल डिटेल हेर्नुहोस ! किन आमाले यस्तो सम्म गरिन्?
करीब चार महिनादेखि अन्योलमा रहेको मच्छेन्द्रनाथको जात्रा निषेधाज्ञा तोडेर सूचारु गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । स्थानीय, गुठियार तथा जात्रामा सहभागीहरुले असोजमा मलमास लाग्ने भन्दै अहिले नै रथ तान्नुपर्ने अडान लिएका छन् । यसअघि जात्रा सूचारु गर्न पाऊ भन्दै स्थानीय युवाहरु प्लेकार्ड बोकेर पुल्चोकमा भेला भएका थिए।
महानगरीय प्रहरी परीसर ललितपुरका प्रमुख टेकप्रसाद राईका अनुसार आन्दोलितलाई बिहानैदेखि रथयात्रा नगर्न सम्झाइएको थियो । सम्झाउँदा पनि नमानेपछि पानीको फोहरा प्रयोग गरिएको हो। राईले भने,’प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न बाध्य बनाइयो।’
जात्राको विषयमा हाल गुठी संस्थानको मुख्य कार्यालय छलफलमा भइरहेको जात्रामा सम्लग्न दिल कुमार बाराहीले जनाए । उनले भने,’ निष्कर्ष निस्किएको छैन, बैठक जारी छ ।’ लकडाउन र निषेधाज्ञाले जात्रा पटकपटक स्थगित भएकाले स्थानीय आक्रोसित बनेका छन् । जात्रामा ठूलो जमात सहभागी हुने र कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले रोक लगाएको छ ।
निषेधाज्ञाबीच स्थानीय युवाहरुले रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तानेपछि पुलचोकमा झडप भएको छ। प्रहरी र स्थानीयबीच बीच झडप भएपछि भीड तितरवितर पार्न अश्रु ग्यास हानिएको छ। प्रहरीले रथ तान्न तम्सेका युवाहरुलाई रोकेपछि झडप भएको हो। रथ तानेर सडकको बीच भाग पुर्‌याएको छ। ठूलो संख्यामा प्रहरी खटाइएको छ।
मलमास अगाडि नै मच्छिन्द्रनाथलाई बुंगमती लग्नुपर्ने प्रचलनअनुसार स्थानीयले निषेधाज्ञा तोडेर रथ तानेको बताइएको छ। असोज २ देखि मलमास सुरु हुँदैछ। यसअघि रथयात्राका लागि ललितपुरको पुल्चोकमा जम्मा भएका स्थानीय युवाहरुले रथ तान्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। बिहानैदेखि सयौं संख्यामा स्थानीय जम्मा भएका थिए। कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन बाक्लो संख्यामा प्रहरी उपस्थित गराइएको थियो। कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै प्रहरीले स्थानीयलाई माइकिङ गरेर घर जान आग्रह गरेको थियो।
कोरोना महामारीका कारण निर्धारित तिथिमा हुन नसकेको रथ जबरजस्ती तानिएको हो । मलमास अगाडि नै मच्छिन्द्रनाथलाई बुंगमती लग्नुपर्ने प्रचलनअनुसार स्थानीयले निषेधाज्ञा मिचेका हुन्। लकडाउन खुकुलो भएपनि उपत्यकामा संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएपछि गुठी संस्थान ललितपुरले सूचना जारी गर्दै रथारोहण स्थगित गरेको थियो। कोरोनाका कारण उपत्यकामा धार्मिक गतिविधि तथा जमघटमा रोक लगाइएको छ।
वैशाख कृष्ण पक्षको प्रतिपदाबाट सुरु हुने जात्रा लिच्छवीकालदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रा नेपालकै सबैभन्दा लामो जात्रा मानिन्छ।
Previous articleकोठामा मोज गर्दै गर्दा,रंगे हात समातियो, म निदाको बेला आमा र अङ्कल पल्लो खाटमा, ८ बर्षीय छोराको बयान
Next articleआमा छोरा का’ण्डको बारेमा अलौकिक माताको डरलाग्दो खुलाशा, दीइन यस्तो चुनौती, बच्चा कस्को ? Surkhet